कब्जियतबाट पीडित हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी ५ उपाय - Health Today Nepal
कब्जियतबाट पीडित हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी ५ उपाय
May 27th, 2019 स्वास्थ्य सुझाब0comments
एजेन्सी,जेठः कब्जियत भनेको मल त्याग्दा आउने समस्या हो । यो आम समस्या हो र जुन उमेरका मान्छेलाई पनि कब्जियत हुनसक्छ ।
लामो समयसम्म यो समस्या छ र यसको कुनै उपचार गरेको छैन भने यो गम्भीर रोगमा परिणत हुन्छ । तर, निम्नलिखित ५ सरल उपाय अपनाए कब्जियतबाट छुटकारा पाउन सकिन्छः
आधा कागती, एक कप तातो पानी, एक चम्चा मह, आधी चम्चा जीराको धूलो । एक गिलास तातो पानीमा कागतीको रस, मह र जीराको धूलो हालेर मज्जाले घोल्नुस् । कागतीको जुस तयार भयो । यी जुसहरूले तपाईंको कब्जियत भगाइदिन्छन् ।
एउटा स्याउ, आधी चम्चा सूपको धूलो, आधी कप पानी लिनुस् । सबभन्दा पहिला स्याउ काट्नुस् र ब्लेन्डरमा पिस्नुस् । त्यसपछि यसमा पानी हालेर फेरि एकचोटि ब्लेन्डरमा हाल्नुस् । जुसलाई एउटा गिलासमा निकालेर त्यसमा सूपको धूलो हाल्नुस् र राम्ररी घोल्नुस् । जुस तयार भयो र अब मज्जाले पिउनुस् ।
३. सुक्खा जामुन
६ वटा सुक्खा जामुन, आधा चम्चा मह, आधा चम्चा जीराको धूलो र एक कप तातो पानी जम्मा गर्नुस् । पाँच मिनेटसम्म सुक्खा जामुनलाई तातो पानीमा भिजाउनुस् । त्यसपछि त्यसको बिउ निकाल्नुस् र ब्लेन्डरमा राखेर मजाले पिस्नुस् । त्यसपछि त्यसमा मह र जीराको धूलो हाल्नुस् । अनि फेरि एकचोटि ब्लेन्डर चलाउनुस् । तपाईंको जुस तयार भयो ।
दुईवटा नासपाती, दुई चम्चा कागतीको रस, एक चिम्टी बिरेनुन जम्मा पार्नुस् । नासपातीका सानासाना टुक्रा पार्नुस् र ब्लेन्डरमा पिस्नुस् । पिसेपछि एउटा गिलासमा रस निकाल्नुस् । त्यसपछि गिलासमा कागतीको रस र बीरेनून हाल्नुस् । तपाईंको नासपाती जुस तयार भयो ।
यी ५ उपाय अपनाउनुभयो भने तपाई कब्जियतबाट मुक्त हुनुहुन्छ ।
Previous article स्वास्थ्यकर्मीलाई काज वा बिदामा नबस्न निर्देशन
Next article स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समिति सक्रिय बनाईदै